Dowladda Iiraan oo qiratay in ay soo ridday diyaaraddii Yukreen ee dadka badan ku dhinteen. | ToggaHerer
← Warsaxaafadeed ka soo baxay odayaasha musdambeedka Oo khuseeya dulqaad ha la badiyo
Madaxda Ukrain oo dalbaday in iiraan ay magdhow ka bixiso diyaaraddii lagu soo riday dalkaasi →
War rasmi ah oo kasoo baxay madaxtooyada dowladda Iiraan ayaa lagu sheegay in diyaaraddii lagalahaa dalka Yukreen ee dhawaan kusoo dhacday duleedka magaalada Dahraan ay si khalad ah usoo rideen ciidamada Iiraan.
“Diyaaradda Yukreen ee burburtay isbuucii lasoo dhaafay waxay ku duushay meel xasaasi ah oo ay kuyaallaan saldhigyo melleteri kadibna ciidamada Iiraan ayaa si khalad ah usoo riday” sidaas waxaa yidhi Xasan Ruuxaani.
Madaxweynaha Iiraan wuxuu sheegay in lala xisaabtami doono saraakiisha melleteriga ee mas’uulka ka ahaa shilkaas wuxuuna carabaabay in maxkamad lasoo taagi doono.
Madaxweynaha dalka Yurkreen oo ka hadlayay qirashada Iiraan ee soo rididda diyaaradda ayaa sheegay in ay dalbanayaan cudur daar rasmi ah oo qaab diblumaasiyadeed ah iyo in magdhow lasiiyo ehellada dadkii ku dhintay diyaaradda lasoo riday